25 Jun 2018 . 7:03 PM
Cristiano Ronaldo (CR7) လို့ ပြောလိုက်ရင် မျက်မှောက်ခေတ်ဘောလုံးလောကရဲ့ မီးရှုးတန်ဆောင်၊ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော်၊ အောင်မြင်မှုများစွာ သိမ်းပိုက်ထားသူ၊ ကွင်းတွင်းကွင်းပြင် ကြိုးစားတဲ့ ကစားသမားစတဲ့ . . . ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူပါ။ Google ၊ Yahoo နဲ့ Bing တို့လို Search Engine တွေမှာ ရှာဖွေမှုအမြင့်ဆုံးသူ၊ ကြော်ငြာငွေအများဆုံးရရှိသူနဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပရိသတ်အများဆုံးရှိတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံလို့သာ သူ့ကို အကျော်ကြားဆုံးအားကစားသမား (Most Famous Athlete in the World) အဖြစ် ESPN က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ သူနဲ့တန်းတူကစားသမားဆိုလို့ Lionel Messi နဲ့ Neymar လောက်သာရှိတဲ့အနေအထား။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်ရဲ့ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအားကစားသမားစာရင်းမှာ Floyd Mayweather (၂၈၅ သန်း) နဲ့ Lionel Messi (၁၁၁ သန်း) တို့ပြီးရင် (၁ဝ၈ သန်း) နဲ့ တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်သူ။ ၂ဝ၁၆ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဝင်ငွေ (၈၈) သန်း ၊ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်တုန်းက (၉၃) သန်းအထိ ဝင်ငွေရှိခဲ့သူ။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း သူ့ရဲ့အသားတင်ကြွယ်ဝမှုက ဒေါ်လာ (၄၅ဝ) သန်းအထိရှိတဲ့ ကစားသမား။
၂ဝ၁၈ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ကြော်ငြာဝင်ငွေက ဒေါ်လာ (၄၇) သန်းအထိ ရှိခဲ့တယ်။ တစ်ဝက်လောက်က Tag Heuer ၊ Herbalife နဲ့ Nike တို့လို အမှတ်တံဆိပ်တွေက ရခဲ့တာပါ။
၂ဝဝ၆ခုနှစ်မှာ Cristiano Ronaldo ဟာ CR7 ဆိုတဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုင်ကို ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ Madeira ကျွန်းပေါ်မှာ ဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဟာ လူကြိုက်များခဲ့လို့ Lisbon မြို့ မှာ ဆိုင်ခွဲဖွင့်နိုင်တဲ့အထိ တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီ၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ ရေမွှေးတွေကိုတောင် CR7 တံဆိပ်နဲ့ ထုတ်နိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူဟာ ဘောလုံးလောကမှ အနားယူသွားမယ်ဆိုရင်တောင် ပြင်ပဝင်ငွေတွေနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်တဲ့သူပါ။
Nike နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်သစ်အရ Cristiano Ronaldo ဟာ တစ်နှစ်မှာ ပေါင် (၁၉) သန်းအထိ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရရှိသွားမှာပါ။ သူဟာ (၇၃) နှစ်ပဲ အသက်ရှည်မယ်ဆိုရင်တောင် စာချုပ်တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ သန်း(၁ဝဝဝ) ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ Castrol ၊ Samsung နဲ့ KFC တို့ဆီကနေ ကြော်ငြာခတင် သန်းချီရနေသူပါ။ သူဟာ Twitter မှာ Follower (၇၄.၁) သန်း၊ Instagram မှာ (၁၃၁) သန်းနဲ့ Facebook မှာ (၁၂၂.၆) သန်းအထိ ပရိသတ်တွေများနေလို့ စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် မျက်စ်ိကျစရာဖြစ်နေတာပါ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်အတွင်းမှာတင် Real Madrid အသင်းကနေ လစာနဲ့ အပိုဆုကြေးက ဒေါ်လာ (၆၁) သန်းအထိရှိခဲ့သူပါ။ (ဒါတောင် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးလာရင် ဒီထက်များနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။)
တကယ်လို့ Cristiano Ronaldo ဟာ အသင်းကထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်တောင် သူ့လစာနှုန်းထားနဲ့ နှစ်ရှည်စာချုပ်မယ်ဆိုရင် စာချုပ်တန်ကြေးဟာ ဒေါ်လာသန်း (၁ဝဝဝ) နီးပါးရှိသွားမှာပါ။ ဒီပမာဏကို တက်နိုင်တဲ့အသင်းဟာ ဘောလုံးလောကမှာ များများစားစားမရှိပါဘူး။ ကဲ . . . ဒီလောက်ဝင်ငွေတွေ ကောင်းနေတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးနေသလဲ။
Cristiano Ronaldo ဟာ မော်တော်ကားဝါသနာအိုးတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ ဒေါ်လာ (၃) သိန်းတန် Lamborghini Aventador ကားကြီးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ Maserati ဇိမ်ခံကားကြီးကိုလည်း မြတ်မြတ်နိုးနိုး စီးနေတဲ့သူပါ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ Bugatti Chiron ၊ Bentley ၊ Porsche ၊ Mercedes နဲ့ တခြားဇိမ်ခံကားတွေအများကြီးကို ဝယ်ထားပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် Cristiano Ronaldo ဟာ ကားမောင်းကြမ်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တုန်းက သူစီးလာတဲ့ ဒေါ်လာ (၃၂ဝ,ဝဝဝ) တန် Ferrari ကားဟာ Manchester မြို့မှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး ပျက်စီးသွားပေမယ့် သူကတော့ ‘သတ္တဝါတစ်ခု ကံတစ်ခု’ လို သဘောထားခဲ့ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံ Madraid မြို့မှာ Cristiano Ronaldo နေတဲ့ သီရိဂေဟာဟာ ကာလတန်ကြေး ဒေါ်လာ (၇.၁) သန်းတောင် ရှိပါတယ်။ ဒီအိမ်တော်ကြီးကို စပိန်နာမည်ကျော် ဗိသုကာပညာရှင် Joaquin Torres တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးခဲ့တာပါ။ အိမ်အတွင်းပိုင်းကိုလည်း အလန်းစားတည်ဆောက်ထားပြီး ရေကူးကန်တွေ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ နေချင်စဖွယ်ကြီးပါ။ Trump Tower မှာလည်း ဒေါ်လာ (၁၈.၅) သန်းတန် ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းကြီးကိုလည်း ၂ဝ၁၅ခုနှစ်တုန်းက ရောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။
၂ဝ၁၆ခုနှစ်တုန်းကလည်း မွေးရပ်မြေပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာ ဘောလုံးကွင်းပုံစံ ဖန်တီးထားတဲ့ Pestana CR7 ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ဝင်ငွေကောင်းနေတာပါ။ သူဝတ်ထားတဲ့ Jacob & Co နာရီဟာ ဒေါ်လာ (၁၆ဝ,ဝဝဝ) အထိ ရှိပါတယ်။ Cristiano Ronaldo ဟာ Madrid Museum of Wax မှာ ထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ဖယောင်းရုပ်ပုံတူကို သဘောကျပြီး ပညာရှင် Michael Wade ကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်လာ (၃) သိန်းပေးခဲ့ပြီး ပုံတူနောက်တစ်ရုပ်ကို ဆက်ဖန်တီးခိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်။
အားကစားလောကမှာ ထွန်းတောက်နေတုန်း ၂ဝ၁ဝခုနှစ်မှာ Cristiano Ronaldo ဟာ ရုရှားမော်ဒယ် Irina Shayk နဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ဝ၁၅ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာတော့ နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ စပိန်မော်ဒယ် Georgina Rodriguez နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ Alana Martina ဆိုတဲ့ သမီးလေးမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ (သူဟာ CR7 Junior ၊ Eva Maria နဲ့ Mateo ဆိုတဲ့ အမွှာကလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။)
Cristiano Ronaldo ဟာ ဖက်ရှင်ဂုရုကြီးဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးကြီးဝတ်စုံတွေကို ဆင်မြန်းတတ်ရုံမက Armani ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီအတွက် မော်ဒယ်လုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
လူသားတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် ဝမ်းသာမှု၊ ဝမ်းနည်းမှုတွေကို သယ်ပိုးပြီး အောင်မြင်မှုခရီးလမ်းပေါ်မှာ ချွေးစက်တွေနဲ့ ဆက်လှမ်းနေသူက ဘယ်သူလဲလို့မေးလာရင် ပြည်သူ့အချစ်တော် Cristiano Ronaldo ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit – ESPN ၊ Business Insider
ပိုကျဆံတှကေို ဘယျလိုရှာပွီး ဘယျမှာသုံးလိုကျတာလဲ Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (CR7) လို့ ပွောလိုကျရငျ မကျြမှောကျခတျေဘောလုံးလောကရဲ့ မီးရှုးတနျဆောငျ၊ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော၊ အောငျမွငျမှုမြားစှာ သိမျးပိုကျထားသူ၊ ကှငျးတှငျးကှငျးပွငျ ကွိုးစားတဲ့ ကစားသမားစတဲ့ . . . ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့သူပါ။ Google ၊ Yahoo နဲ့ Bing တို့လို Search Engine တှမှော ရှာဖှမှေုအမွငျ့ဆုံးသူ၊ ကွျောငွာငှအေမြားဆုံးရရှိသူနဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ပရိသတျအမြားဆုံးရှိတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ ပွညျ့စုံလို့သာ သူ့ကို အကြျောကွားဆုံးအားကစားသမား (Most Famous Athlete in the World) အဖွဈ ESPN က သတျမှတျထားပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ သူနဲ့တနျးတူကစားသမားဆိုလို့ Lionel Messi နဲ့ Neymar လောကျသာရှိတဲ့အနအေထား။ ၂ဝ၁၈ခုနှဈရဲ့ ဝငျငှအေကောငျးဆုံးအားကစားသမားစာရငျးမှာ Floyd Mayweather (၂၈၅ သနျး) နဲ့ Lionel Messi (၁၁၁ သနျး) တို့ပွီးရငျ (၁ဝ၈ သနျး) နဲ့ တတိယနရောမှာ ရပျတညျနိုငျသူ။ ၂ဝ၁၆ခုနှဈတုနျးကလညျး ဝငျငှေ (၈၈) သနျး ၊ ၂ဝ၁၇ခုနှဈတုနျးက (၉၃) သနျးအထိ ဝငျငှရှေိခဲ့သူ။ လကျရှိအခြိနျမှာလညျး သူ့ရဲ့အသားတငျကွှယျဝမှုက ဒျေါလာ (၄၅ဝ) သနျးအထိရှိတဲ့ ကစားသမား။
၂ဝ၁၈ခုနှဈအတှငျးမှာပဲ သူ့ရဲ့ကွျောငွာဝငျငှကေ ဒျေါလာ (၄၇) သနျးအထိ ရှိခဲ့တယျ။ တဈဝကျလောကျက Tag Heuer ၊ Herbalife နဲ့ Nike တို့လို အမှတျတံဆိပျတှကေ ရခဲ့တာပါ။
၂ဝဝ၆ခုနှဈမှာ Cristiano Ronaldo ဟာ CR7 ဆိုတဲ့ ဖကျရှငျဆိုငျကို ပျေါတူဂီနိုငျငံ Madeira ကြှနျးပျေါမှာ ဖှငျ့လိုကျခဲ့တယျ။ သူ့ရဲ့အမှတျတံဆိပျဟာ လူကွိုကျမြားခဲ့လို့ Lisbon မွို့ မှာ ဆိုငျခှဲဖှငျ့နိုငျတဲ့အထိ တိုးတကျခဲ့ပါတယျ။ ရှပျအင်ျကြီ၊ အတှငျးခံဘောငျးဘီနဲ့ ရမှေေးတှကေိုတောငျ CR7 တံဆိပျနဲ့ ထုတျနိုငျတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ တကယျလို့ သူဟာ ဘောလုံးလောကမှ အနားယူသှားမယျဆိုရငျတောငျ ပွငျပဝငျငှတှေနေဲ့ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံနနေိုငျတဲ့သူပါ။
Nike နဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျသဈအရ Cristiano Ronaldo ဟာ တဈနှဈမှာ ပေါငျ (၁၉) သနျးအထိ သကျတမျးတဈလြှောကျလုံး ရရှိသှားမှာပါ။ သူဟာ (၇၃) နှဈပဲ အသကျရှညျမယျဆိုရငျတောငျ စာခြုပျတနျဖိုးက ဒျေါလာ သနျး(၁ဝဝဝ) ဖွဈသှားမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ သူဟာ Castrol ၊ Samsung နဲ့ KFC တို့ဆီကနေ ကွျောငွာခတငျ သနျးခြီရနသေူပါ။ သူဟာ Twitter မှာ Follower (၇၄.၁) သနျး၊ Instagram မှာ (၁၃၁) သနျးနဲ့ Facebook မှာ (၁၂၂.၆) သနျးအထိ ပရိသတျတှမြေားနလေို့ စီးပှားရေးသမားတှအေတှကျ မကျြစိကစြရာဖွဈနတောပါ။ ဒါ့အပွငျ သူဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှဈအတှငျးမှာတငျ Real Madrid အသငျးကနေ လစာနဲ့ အပိုဆုကွေးက ဒျေါလာ (၆၁) သနျးအထိရှိခဲ့သူပါ။ (ဒါတောငျ စာခြုပျသကျတမျးတိုးလာရငျ ဒီထကျမြားနိုငျဖှယျရှိပါတယျ။)
တကယျလို့ Cristiano Ronaldo ဟာ အသငျးကထှကျခှာမယျဆိုရငျတောငျ သူ့လစာနှုနျးထားနဲ့ နှဈရှညျစာခြုပျမယျဆိုရငျ စာခြုပျတနျကွေးဟာ ဒျေါလာသနျး (၁ဝဝဝ) နီးပါးရှိသှားမှာပါ။ ဒီပမာဏကို တကျနိုငျတဲ့အသငျးဟာ ဘောလုံးလောကမှာ မြားမြားစားစားမရှိပါဘူး။ ကဲ . . . ဒီလောကျဝငျငှတှေေ ကောငျးနတေဲ့ ကစားသမားတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ဝငျငှတှေကေို ဘယျနရောမှာ သုံးနသေလဲ။
Cristiano Ronaldo ဟာ မျောတျောကားဝါသနာအိုးတဈယောကျပါ။ သူဟာ ဒျေါလာ (၃) သိနျးတနျ Lamborghini Aventador ကားကွီးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားသူပါ။ Maserati ဇိမျခံကားကွီးကိုလညျး မွတျမွတျနိုးနိုး စီးနတေဲ့သူပါ။ ဒါ့အပွငျ သူဟာ Bugatti Chiron ၊ Bentley ၊ Porsche ၊ Mercedes နဲ့ တခွားဇိမျခံကားတှအေမြားကွီးကို ဝယျထားပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ Cristiano Ronaldo ဟာ ကားမောငျးကွမျးတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ၂ဝဝ၉ ခုနှဈတုနျးက သူစီးလာတဲ့ ဒျေါလာ (၃၂ဝ,ဝဝဝ) တနျ Ferrari ကားဟာ Manchester မွို့မှာ ယာဉျတိုကျမှုဖွဈပွီး ပကျြစီးသှားပမေယျ့ သူကတော့ ‘သတ်တဝါတဈခု ကံတဈခု’ လို သဘောထားခဲ့ပါတယျ။
စပိနျနိုငျငံ Madraid မွို့မှာ Cristiano Ronaldo နတေဲ့ သီရိဂဟောဟာ ကာလတနျကွေး ဒျေါလာ (၇.၁) သနျးတောငျ ရှိပါတယျ။ ဒီအိမျတျောကွီးကို စပိနျနာမညျကြျော ဗိသုကာပညာရှငျ Joaquin Torres တာဝနျယူတညျဆောကျပေးခဲ့တာပါ။ အိမျအတှငျးပိုငျးကိုလညျး အလနျးစားတညျဆောကျထားပွီး ရကေူးကနျတှေ အားကစားလကေ့ငျြ့ခနျးတှနေဲ့ နခေငျြစဖှယျကွီးပါ။ Trump Tower မှာလညျး ဒျေါလာ (၁၈.၅) သနျးတနျ ဇိမျခံတိုကျခနျးကွီးကိုလညျး ၂ဝ၁၅ခုနှဈတုနျးက ရောငျးခဲ့ပါသေးတယျ။
၂ဝ၁၆ခုနှဈတုနျးကလညျး မှေးရပျမွပေျေါတူဂီနိုငျငံမှာ ဘောလုံးကှငျးပုံစံ ဖနျတီးထားတဲ့ Pestana CR7 ဇိမျခံဟိုတယျကွီးကို ဖှငျ့လှဈခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့လညျး ဝငျငှကေောငျးနတောပါ။ သူဝတျထားတဲ့ Jacob & Co နာရီဟာ ဒျေါလာ (၁၆ဝ,ဝဝဝ) အထိ ရှိပါတယျ။ Cristiano Ronaldo ဟာ Madrid Museum of Wax မှာ ထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ဖယောငျးရုပျပုံတူကို သဘောကပြွီး ပညာရှငျ Michael Wade ကို ဆကျသှယျခဲ့ပါတယျ။ ဒျေါလာ (၃) သိနျးပေးခဲ့ပွီး ပုံတူနောကျတဈရုပျကို ဆကျဖနျတီးခိုငျးခဲ့ပါသေးတယျ။
အားကစားလောကမှာ ထှနျးတောကျနတေုနျး ၂ဝ၁ဝခုနှဈမှာ Cristiano Ronaldo ဟာ ရုရှားမျောဒယျ Irina Shayk နဲ့ ခဈြကြှမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂ဝ၁၅ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာတော့ နှဈဦးသဘောတူလမျးခှဲခဲ့ပါတယျ။ စပိနျမျောဒယျ Georgina Rodriguez နဲ့ ခဈြသူတှဖွေဈခဲ့ပွီး ၂ဝ၁၇ခုနှဈ နိုဝငျဘာလမှာ Alana Martina ဆိုတဲ့ သမီးလေးမှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ (သူဟာ CR7 Junior ၊ Eva Maria နဲ့ Mateo ဆိုတဲ့ အမှာကလေးတှေ ရှိပါသေးတယျ။)
Cristiano Ronaldo ဟာ ဖကျရှငျဂုရုကွီးဖွဈပွီး တနျဖိုးကွီးဝတျစုံတှကေို ဆငျမွနျးတတျရုံမက Armani ဖကျရှငျကုမ်ပဏီအတှကျ မျောဒယျလုပျပေးခဲ့ပါသေးတယျ။
လူသားတဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ ဝမျးသာမှု၊ ဝမျးနညျးမှုတှကေို သယျပိုးပွီး အောငျမွငျမှုခရီးလမျးပျေါမှာ ခြှေးစကျတှနေဲ့ ဆကျလှမျးနသေူက ဘယျသူလဲလို့မေးလာရငျ ပွညျသူ့အခဈြတျော Cristiano Ronaldo ပဲဖွဈပါတယျ။